eParewa || Peace and Prosperity » पशुजन्य पदार्थको उत्पादन बृद्धि गर्न आधुनिक घासँको उत्पादन गर्ने तरिका
पशुजन्य पदार्थको उत्पादन बृद्धि गर्न आधुनिक घासँको उत्पादन गर्ने तरिका
२०७५ पुस २९ गते आईतबार १२:२७
पशुजन्य पदार्थको उत्पादन बृद्धि गर्न आधुनिक घासँको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किनकी पछिल्लो समय तिव्र रुपमा वढिरहेको जनसंख्यासंगै उनीहरुले उपभोग गर्ने मासुजन्य पदार्थकालागि पनि पशुजन्य वस्तुको माग पनि उच्च हुदै गएको...
पशुजन्य पदार्थको उत्पादन बृद्धि गर्न आधुनिक घासँको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किनकी पछिल्लो समय तिव्र रुपमा वढिरहेको जनसंख्यासंगै उनीहरुले उपभोग गर्ने मासुजन्य पदार्थकालागि पनि पशुजन्य वस्तुको माग पनि उच्च हुदै गएको छ ।
घासँको मागअनुसार उत्पादन हुनै नसक्ने अवस्था छ । आधुनिक युगमा किसानहरुले व्यावसायिक पशुपालन गर्ने जमर्कों गरिरहेका वेला पशुपालन व्यावसायबाट फाईदा लिने हो भने पशुपालक कृषकले आधुनिक तथा उन्नत घाँस खेतीगर्न आवश्यक रहेको छ । यसकालागि कृषकहरुलाई उन्नत बीउ, औजार खेती प्रविधि लगाउतका विभिन्नकुराको अति आवश्यक हुन्छ ।
कृषकले घाँस सम्बन्धी पुस्तक, फर्म तथा जानकार व्यक्तिहरुसँग सल्लाह लिएर घाँस खेतीगर्ने तौर तरिकालाई बुझि व्यावसायिक घाँस खेती गर्नाले वजारमा पशुजन्य वस्तुवाट उत्पादित मागलाई पुरा गर्न सजिलैसँग सकिन्छ ।
घास खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
१ प्रायजसो वारीका कान्लाहरुमा खेती गर्ने चलन छैन तर जान्यो भने खेती गर्न नमिल्ने वारीका कान्लाहरुबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । स्थानीय डालीघाँसका रुख बिरुवाहरुबाट बाह्रै महिना किसानलाई चाहिने जति घाँस आउदैन । ठीकसँग बेलाबेलामा काटछाँट नगरेमा बालीनालीमा सेप लाग्छ । स्थानीय डालेघाँसको रुखहरु अग्लो राख्ने चलन भएको हुँदा घाँस काट्न रुख चढ्ने मान्छे रुखबाट खसेर अंगभंग हुने वा मर्न पनि सक्छ ।
२ .आफुलाई चाहिनेजति डालेघाँसतथा भूईघाँसका बोटबिरुवाहर आफ्नै घर छेउमा नर्सरी बनाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । खेती नगरिने कान्लाबाट फाइदा लिन पोषिलो डालेघाँस र भुईघाँस लगाउनु पर्दछ । कान्लाको डिलमा भूईघाँस लगाउनाले वस्तुहरुलाई घाँस पनि हुन्छ र खेती गरिने पाखो जग्गाबाट बर्षायाममा माटो बग्नबाट पनि रोकिन्छ । घाँस खेती गर्दा मिस्रित डालेघाँस लगाँउदा बढि उपयुक्त हुन्छ । वातावरणमा कार्वनको मात्रा घटाउन सहयोग पुग्दछ । जमिनको उर्वराशक्ति वृद्धि गरिरहन्छ ।
कान्लामा लगाएर फाईदा लिन सकिने पोसिलो भूईघाँसहरु ः
तराई र मध्य पहाडको लागिः एन. वी २१ नेपियर , वन्सो, स्टाइलो, मोलासेस आदि ।
उच्च पहाडको लागिः सेटारिया, क्लोभर (सेतो, रातो, हाइफा), लेस्पेडीजा र राईघाँस आदि ।
३ .घाँस रोपेको डिल मुनि कान्लामा दुईदुई हातको फरकमा जमिनमा जरा तलसम्म जाने, कोषा फल्ने, पोषिलो घाँसपात, स्याउला र बर्षभरी बारम्बार काट्न पाईने रुखहर धेरै अगिलन दिनु हुदैन ।
कान्लामा लगाएर फाइदा लिन सकिने पोषिलो डालेघाँसहरु
बेसीमा किराले नखाने जातको इपिल, क्यालियान्द्रा, गजुमा, भटमासे, रहरी, किम्बु , टाँकी बडहर इत्यादी ।
ठण्डा उच्च पहाडी भेगहरुमाः ठण्डा मन पराउने, कीराले नखाने जातको इपिल, दुधिलो गोगन इत्यादी । ं.
४.कान्ला निकै अग्लो छ भने बीच भागमा जात अनुसार दुई हात वा सो भन्दा बढी फरकमा अरु स्थानीय डालेघाँसहरु लगाउन सकिन्छ । जेठ असारमा पानी परिरहेको बेलामा वा बदली दिन पारी बेर्ना सार्नुपर्दछ । अरु हरियो घाँस नपाइने बेलामा घाँस काट्न पाइने र आफ्नो ठाँउमा हुने जातको बिरुवा छान्नु पर्छ । अन्दाजी एक मान्छे भन्दा अग्लो ( करिब २ मिटर ) कान्लामा डालेघाँस्को दुईवटा लाइन (लाम) बनाउन सकिन्छ । यसरी बिरुवा लगाउँदा पहिलो लाइनमा यानै डिलमुनी कोष फल्ने, मलिलो, ओग (सेप) नलाग्ने र जरा गह्रामा नफैलने प्रजाती प्रजाती लगाउनु पर्दछ भने दोस्रो लाइनमा कोषा नफाल्ने र पात फराकिलो हुने जातका डालेघाँस प्रजाती लगाउन सकिन्छ ।
पहिलो लाइनमा लगाउन उपयुक्त प्रजातीहरु
तराई र मध्य पहाडको लागिः इपिल, इपिल, भटमासे, रहरी र टाँकी आदि ।
उच्च पहाडको लागिः किराले नखाने इपिलका विभिन्न प्रजाती र अन्य कोशा फल्ने प्रजातीहरु
दोस्रो लाइनमा लगाउन उपयुक्त प्रजातीहरु
तराई र मध्य पहाडको लागिः काभ्रो, राईखनायो, कुटमिरो , गेडुलो, कोराइलो , ढैँचा , किम्बु आदि ।
उच्च पहाडको लागि उपयुक्त प्रजातीहरुः चुलेत्रो , राई खनायो , भाटेपिपल, निमारो आदि ।
५ .यस्तो तीन तहको रोपाईले कान्लाहरु पनि काममा आउने भएकोले कोषे डालेघाँस, अरु जातको डालेघाँस र भूईघाँस पनि पाईने भयो । केहि दाउरा पनि आयो र माटो बग्नबाट रोकथाम पनि हुने भयो ।
थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भने भूईघाँस कम्तिमा ६ महिना र डालेघाँस एकदुई पुगेपछि मात्र काट्न योग्य हुन्छ । डालेघाँस बिरुवाको केही जातलाई अरु बढी समय पनि लाग्न सक्छ । उच्च पहाडी इलाकामा रुखहरु तराईमा भन्दा ढिलो बढ्छन् ।
६.इपिल इपिल रोपेको छ, भने वर्षभरी एकनास रुपलेृ घाँस पाउन विरुवालाई हाम्रो छातीको उचाई (३.५फुट) मा काट्नु पर्दछ । घाँस काट्ने बेलामा मोटामोटी एक चौथाई जति पात विरुवामै र रहन दिएमा घाँस छिटो पलाएर आउँछ । घाँस काट्ने विरुवालाई फुल्न दिन हुदैँन स्थानीय जातका डालेघाँसका विरुवाहरु निकै हााचो गरी फेदमै कटेमा विरुवा झागिंएर आउँछ र बालीमा पनि सेप लाग्दैन । एन .वी २१ र नेपियर जातको घाँस ठााउ हेरी प्रत्येक महिना काट्न सकिने हुन्छ । स्टाइलो, मोलासेस छ भने बीउ लाग्न दिनु हुदैन ।
७. यसरी वारीका कान्लाहरमा घाँस दिने विरुवाहरु लगाउँदा ४, ५ बर्षमा बढी पोषिलो घाँस पाउँछौ । वस्तुहरु मोटाघाटा हुन्छन् , साथै मासु, दुध र मल बढी पाउँछौ माटोको जगेर्ना हुन्छ , हाम्रो बालीको उब्जनी पनि बढी हुन्छ । हाम्रो गाँउघरको वातावरण सप्रिन्छ र हामी सबैको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ । तपाई घाास खोज्न घर छोडेर टाढा वनमा जानुपर्ने हुँदैन । हाम्रो घर र गोठ वरीपरी बाँस, फलफुल र अन्य डालेघाँसका रुखहरु लगाएर अझ बढी उत्पादन लिन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७५ पुस २९ गते आईतबार १२:२७